Oktoobar | 2014 | WEEJIDOW
Archive for Oktoobar, 2014
War deg deg ah: Raisul Wasaare CABDIWELLI OO ka guurey Madaxtooyada
Oktoobar 31, 2014
WAAJIDPRESS – 31 Oct 2014:
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federalka Somaliya Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa waxa uu ka guuray mid ka mid ah dhismooyinka uu ka degan yahay Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Madaxtooyada Magaalada Muqdisho oo dhismooyin fara badan laga dhisay, ayaa waxay ka kooban tahay dhismooyin badan oo gaar gaar ah, iyadoona uu Ra’iisal Wasaaruhu baneeyay Gurigii Martida, oo uu dejiyay Madaxweynaha Somaliya, markii uu soo magacaabay daba yaqaadii bishii December.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa Villa Somalia waxa uu ka deganaa ilaa saddex qaybood, kuwaa oo kala ah Gurigii Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), Gurigii Martida iyo dhismaha xafiiskiisu uu ku yaalo.
Ra’iisal Wasaare C/weli oo laba xaasle ah, ayaa waxay mid ka mid ah degan tahay Gurigii Saacad, iyadoo midda kalana ay degan tahay dhismaha ka soo horjeeda albaabka hore ee Madaxtootada Muqdisho.
Wasiirka 1-aad ee Xukuumada, ayaa maalintii Khamiista si rasmi ah u xiray laamiga ku yaala inta u dhaxeyso ilinka hore ee Madaxtooyada laga galo iyo hoyga ka soo horjeeda. Markii hore waxaa yaalay gaadiidka Cabdi Billaha, balse waxa uu xilligaan ku gooyay gawaarida qufulan ee Amisom.
Tani, ayaa waxay ku soo aadeysaa, iyadoo uu shalay galab Magaalada Muqdisho ku geeriyooday Taliyihii Ciidanka Booliska Somaliya General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, ayna jiraan warar sheegaaya in la qaarajiyay.
Sidoo kale waxaa la dhihi karaa waxay amuurtaan ku soo aaday, iyadoo Ra’iisal Wasaaruhu uu khilaaf xoogan kala dhaxeeyo Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Ra’iisal Wasaaraha ku eedeeyay in uu ka gaabiyay inuu la shaqeeyo, wuxuuna xilligaan diirada saarayaa, sidii uu daaqada kaga saari lahaa.
SHIRKII burcad badeedka OO MAANTA soo gabagaboobey
DOWLADA Federaalka Soomaaliya ayaa WAXAA UGA qeybgalay wasiirka Gaashaandhiga Gen. Maxamed Sheekh XASSAN (OO ka soo jeeda beesha DIGIL & MIRIFLE).
Shirweyniha UAE Counter-Piracy Conference 2014 ee ka furmay Hotelka weyn ee caalamiga ah ee JM MARRIOTT MARQUIS DUBAI ee magaalada Dubai ee wadanka isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta soo gabagaboobay.
Kulankan caalamiga ah oo ay kasoo qayb galeen wafuud cadadkoodu uu gaadhay ilaa 200 oo ergay iyo marti sharaf badan oo kale oo qiyaastii 700 qof ahayd ayaa waxaa ay isugu jireen wufuudaasi kuwo ka kala yimi wadamo ay tiradoodu gaadhaysay 30 wadan,NATO, EURIPION UNION, United Nation ka iyo wakiilo ka kala socday shirkado ay ka mid ahaayeen DP World, ayaa ah mid looga arinsanayo arimaha Budhcad badeednimada oo noqotay mid adduunka oo idil gacanta ay ka teegeen.
iyado Dowlada Federaalka iyo maamulada goboledyada somalia ay goob joog ka ahaayeen ayaa xitaa Somalilan la fariisiyey dhinaca MAAMUL goboleedyada somaliya.
DAAWO: HEES CUSUB OO LOO SAMEEYEY CALANKA DOWLAD GOBOLEEDKA LIXDA GOBOL EE KOONFRU GALBEED SOOMAALIYA
Xasan Sh. oo mowqifkiisa u caddeeyey caalamka mowqifkiisa ku aadan Raisul Wasaare Cabdiwelli
Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa la soo sheegayaa in go’aan kama dambeys ah uu ka qaatay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Iyadoo Beesha Caalamka soo jeedisay inay wada shaqeeyaan Masuuliyiinta Dowladda Federalka, ayaa waxaa hadana la tilmaamay in Madaxweynaha Somaliya uu Ra’iisal Wasaaruhu u arko mid aynaan wada shaqayn karin, isla-markaana ay lagama maarmaan tahay in isbedel la helo.
Madaxweynaha, ayaa Beesha Caalamka u sheegay inaysan suurta geli doonin hiigsiga sanadka 2016-ka, haddii Xafiiska Shaqada uu sii jooggo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada, isla-markaana uu soo jeedinaayo in xubin kale lagu soo bedelo.
Sidoo kale Madaxweynaha, ayaa Caalamka u sheegay in Dowladdiisu ay dooneyso in Xafiiska Shaqada uu isaga taggo Wasiirka 1-aad ee Xukuumada, haddii kalana ay go’aan kama dambeys ah uu ka gaari doono Baarlamaanka.
Ilo lagu kalsoonaan karo, ayaa Dhacdo.com u sheegay in qorshaha Madaxweynuhu uu yahay, iyadoo uu meesha ka baxo C/weli Sheekh Axmed Maxamed, maadaama uu ka gaabiyay in uu la shaqeeyo Hogaamiyaha Wadanka.
Madaxweynaha, ayaa waxa uu qabaa in Ra’iisal Wasaaruhu uu u soo magacaabay si uu ula shaqeeyo, ha yeeshee uu markii dambe uu Ra’iisal Wasaaruhu uu isu arkay masuul ku awood ah Madaxweynihii tallada dalka haayay.
Madaxweynuhu wuxuu C/weli Sheekh Axmed uu ku heystaa in uu Baarlamaanka ka soo celiyay hindise sharciyeedyo ay horey ugu gudbisay Xukuumada, kuwaa oo laga xusi karo sharciyada ka hortagga musiibooyinka iyo qaxootiga. Waxaa kaloo jiro in Ra’iisal Wasaaraha lagu eedeynaayo in uu caqabad ku noqday hawlaha dardargelinta ee Garsoorka.
Dhanka kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxa uu xal u raadinayaa khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha. Walow Madaxweynuhu uuba cadeeyay inaanay wada shaqayn karin Ra’iisal Wasaaraha.
Wararka laga helaayo Madaxtooyada Magaalada Muqdisho ee la xiriira khilaafaadka ka dhex taagan Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha, ayaa waxay yihiin kuwo si weyn isu soo taraaya.
War deg deg ah: Majeerteen iyo Habargidir oo maanta xoog leh ku dhexmarey magaalada Galkacayo ee gobolka Mudug
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay Dagaal beeleed oo u dhaxeeya beelaha (MAJEERTEEN IYO HABARGIDIR) oo uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta.
Dagaalka oo muddo saacado ah qaatay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanno hoos yimaada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, iyadoona uu dagaalkaasi u dhexeeyay maleeshiyo beeleedyo ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland.
Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku dhintay afar kalena waxaa soo gaaray dhaawac sida ay wararku noogu xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Dhanka kale, Deegaanada ay Maleeshiyaadkani ku dagaalameen ayaa qiyaas ahaan 100 KM waxay u jiraan magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug.
Guddiga Maaliyada ee Baarlamaanka Somaliya oo MAANTA DOORTEY Gudoomiye CUSUB
WAAJIDPRESS – 30 Oct 2014:
Guddiga Maaliyada iyo Qorsheynta Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay doorteen Guddoomiyaha Guddigaasi, kadib markii Guddoomiyihii hore ee Guddigan Sheekh Aadan Madeer (ALLAHA U NAXARIISTO) ay kooxo hubaysan ay Magaalada Muqdisho ku dileen.
Doorasho ka dhacday dhismaha Villa Hargaysa ee Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa lagu doortay Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Maaliyada Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana madashii ay doorashada ka dhaceysay ku sugnaa Jeylaani Nuur Iikar, Guddoomiye kuxigeenka Koowaad ee Baarlamaanka dalka.
Waxaa loo doortay xilkaan Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir oo ay u codeeyeen dhamaan Xildhibaanadii madasha ku sugnaa ee Guddiga Maaliyada kamidka ah, mana jirin Xildhibaan ka aamusay iyo mid codka u diiday intaba.
Jeylaani Nuur Iikar, Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay inuu ku amaanaayo Xildhibaanada sida wanaagsan ee ay ku doorteen Guddoomiyaha Guddiga Maaliyada Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga Maaliyada iyo qorsheynta Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir (OO ka soo jeeda BEESHA DIGIL & MIRIFLE) ayaa dhankiisa u mahadceliyay Xildhibaanada doortay, isaga oo sheegay inuu si wanaagsan u qaban doono shaqooyinka loo igmaday.
DAAWO: MADAXWEYNE XASSAN MARKII UU BOOQDEY OHIO AYAA LOO SHEEGEY IN JUBOOYINKA AY LEEYIHIIN QOWMIYADA KU ABTIRSATA DIGIL & MIRIFLE
KHILAAFKII MADAXDA OO MEEL XUN GAAREY IYADOO MAANTA RA’ISUL WASAARE CABDIWELLI TALIYE CUSUB EE BOOLISKA MAGACAABEY LA TASHI LA’AAN
Oktoobar 30, 2014
Khilaafkii Madaxweyne Xassan iyo Ra’isul Wasaare ayaa cirka isku shareerey iyadoo uu maanta si lama filaan ah oo uu Ra’iisal Wasaare Cabdiweli u magacabay Taliye cusub oo ay yeelato Ciidamada Booliska kadib markii uu maanta geeriyooday taliyihii Booliska Soomaaliyed.
Gen. Cusmaan Cumar Wehliye (Gas-gas) ayaa si KMG ah loogu magacabay Jagada Taliyaha Booliska Soomaaliyed kadib geeri deg deg ah oo galabta ku timid llaah u naxariistee Taliyihii Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil.
Gen. Cusmaan Cumar Wehliye (Gas-gas) ayaa ka mid ahaa saraakiishii hore ee Ciidamada Soomaaliya waana nin si weyn loogu yaqaano dalka.
Magacabista Raíisal Wasaaraha u magacabay Gen Gas Gas ayaa loogu dhawaaqay shir jaraa;;id oo goor dhaw Muqdisho ku qabtay Ra’iisal Wasaaraha dalka.
Dhanka kale, Raisul Wasaare Cabdiwelli ayaa shaki weyn ka qaadey geeridii ku timid Taliyihii Boliska.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa magacaabay Guddiga Wasiiro ah oo ka kooban shan (5) oo baaritaan ku soo sameeya geerida kadiska ahayd ay maanta ku timid taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed Gen. Maxamed Sheekh (oo ay isku beel yihiin Raisul Wasaare Cabdiwelli).
War CULUS : Gudoomiye Ilka Xanaf oo ka soo horjeestay Garsooreyaal Xilalka Garsoorayaashii uu shalay MADAXWEYNAHA ka qaadey
Shalay Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxaa Xilalkii looga qaaday ilaa 21 Garsoore oo ka Howlgali jiray Maxkamadaha Muqdisho iyo Gobolada Dalka qaarkood.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare Abuukaati Caydiid C/llaahi Ilaka Xanaf oo Muqdisho Shir saxaafadeed ku qabtay ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo Shaqo joojinta lagu sameeyay Garsooreyaasha islamarkaana Gudiga Adeega Garsoorka Dalka aysan waxba kala socon,Dastuurka Dalkana uu dhigayo in markii Gudiga Adeega Garsoorka ay soo gudbiyaan Madaxweynaha Soomaaliya uu xilalka ka qaadi karo.
“Waxaa ku shaqo leh in Xilalka laga qaado Garsooreyaasha Dalka Gudiga Adeega Garsoorka markii ay soo jeediyaan,wali ma arkin meel Xeerilaaliye uu leeyahay Soo jeedinta in Xilalka laga qaado Garsooreyaasha”ayuu yiri Ilka Xanaf.
Gudoomiye Ilka Xanaf ayaa sheegay in Garsooreyaashaasi lamagacaabay Sanadkii 2013-kii,warqada lagu Magacaabayna Madaxweynaha Soomaaliya loo geeyay oo uu Aqbalay,waxaana uu Madaxweynaha Soomaaliya ka Codsaday in uu Go’aankaasi ka Noqdo.
Caydiid Ilka Xanaf ayaa sidoo kale ku Celiyay in Xeerilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir uusan Sharci aheyn islamarkaana Dastuurka Dalka uu dhigayo in Dalka uu yeesho Garyaqaan Guud,oo aysn ku jirin in Dalka uu yeesho Xeerilaaliye Guud,sidaa daraadeedna Shaqsi Sharci daro ku jooga uusan la hayn Soojeedin Garsooreyaal Xilalka looga qaado.
War Deg Deg ah: Taliyihii Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo geeriyooday.
Allaha u naxariirstee waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday, taliyihii ciidanka Booliska Soomaaliyeed, General Maxamed Shiekh Xasan Ismaaciil -(OO ka soo jeeda BEESHA MAREEXAAN).
Taliyaha ayaa waxa uu u geeriyooday xanuun awgiis, sida Saraakiisha Boolisku ay WAAJIDPRESS iyo Radio Muqdiisho u xaqiijiyeen.
Ku- simaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna ku simaha Madaxweynaha Dalka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid Allaha u naxariistee Taliyihii Ciidammada Booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Xasan Ismaaciil oo goor dhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Ku simaha Madaxweynaha Dalka ayaa yiri “INAA LILAAHI WA INAA ILEEYHI RAAJICUUN, Hor iyo horaan anigoo ku hadlaya magaceyga,magaca Madaxweynaha,magaca Guddoonka Baarlamaanka iyo magaca Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaan ka tacsiyadeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid Allaha u naxariistee walaalkeen General Maxamed Xasan oo ahaa Taliyihii Ciidammada Booliiska Soomaaliyeed,waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa jano siiyo,dhammaanteenna uu samir iyo iimaan naga wada siiyo”.
“waxaan tacsi gaar ah u dirayaa Saraakiisha,saraakiil xigeennada,alif leeyda,dableyda iyo dhammaan Ciidammada Booliiska Soomaaliyeed oo uu taliyuhu u ahaa hogaan waxaanna leeyahay dhammaanteen wuu naga wada geeriyooday ee samir iyo iimaan Alle hanaga wada siiyo,gadaashiisna Alle nama fidneeyo”ayuu hadalkiisa kusoo gebagebeeyey Ku simaha Madaxweynaha Dalka ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga imaaraadka Carabta ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii naxdinta laheyd ee ku timid allaha u naxariistee Gen.Maxamed Sheekh Xassan Ismaaciil oo ahaa taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa ka tacsiyeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allaah u naxariistee Taliyihii Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo si kadis ah galabta ugu geeriyooday magaalada Muqdisho.
Isagoo ku hadlaya Magaciisa, kan Xuumadda iyo kan shacabka Soomaaliyeed ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed tacsi u diray qoyskii asxaabtii iyo Ciidamadda Booliska Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday GEN. Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, waxana uu ugu duceeyey in Illaah janadii Fardowso ka waraabiyo.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Oktoobar, 2014.